Semalt မှ ၇-၇ လမ်းကြောင်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် SEO Marketing ကိုလွှမ်းမိုးရန်ဖြစ်သည်
SEO လုပ်ငန်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုအတွက်၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိနေရန်ကူညီသည်။ အပြောင်းအလဲကိုနားလည်ခြင်းသည်အပြောင်းအလဲကိုနားလည်ရန်နှင့်သူတို့၏ပါဝင်မှုနှင့် SEO ဗျူဟာကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်လိုအပ်သည်။
Semalt Digital ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ ဦး ဆောင်ဖောက်သည်အောင်မြင်သူမန်နေဂျာ Jason Adler က ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ SEO ဆိုသည်ကိုအဓိကထားသည် ။
၁။ အရှိန်မြှင့်မိုဘိုင်းစာမျက်နှာများ (AMPs) ပေါ်ထွက်လာခြင်း။
AMP များသည် open source protocol တစ်ခုဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် page loading မြန်စေသည်။ သူတို့သည်အမြန်နှုန်းကိုလေးဆတိုး။ ဒေတာကုန်ကျစရိတ်ကိုရှစ်ကြိမ်လျှော့ချသည်။ ဂူးဂဲလ်သည် AMPs ကိုအထောက်အပံ့ပေးရန်သူတို့၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသောဆိုဒ်များကိုနှစ်သက်သည်။ carousel နှင့်လျှပ်တပြက်ပါ ၀ င်သည့် icon သေးသေးလေးတစ်ခုသည် site ၏ AMP အခြေအနေကိုဖော်ပြသည်။ ဤမျက်နှာသာပေးမှုကြောင့်တံဆိပ်အများစုမှမျှော်လင့်ထားသည့်လုပ်ဆောင်မှုသည်ထိုရွေးချယ်မှု၏အားသာချက်ကိုရယူရန်ဖြစ်သည်။
3. စက်သင်ယူမှု Algorithms အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။
Google RankBrain သည်စက်သင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေများကိုတံခါးဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ Google Hummingbird ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏တိုးချဲ့မှုသည်အသုံးပြုသူများအသုံးပြုသောစကားစုများအားစကားဝိုင်းများမေးမြန်းခြင်းနှင့်အလိုအလျှောက်အဆင့်မြှင့်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။ လူများသည် Google သည်လေ့လာမှုအသစ်များထပ်မံဖြန့်ချိရန်နှင့်အချက်အလက်အနက် (သို့) အလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းစသည့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်ထည့်သွင်းမည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။
၄။ လျှို့ဝှက် SEO လက်နက်အဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် guest ည့်စာများကိုလုံခြုံရန်၊ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပိုမိုအသွားအလာများရန်လွယ်ကူစေရန်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ Semalt သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်အောင်မြင်စွာပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများသည်အမှတ်တံဆိပ်တင်ထားသည့်စာတန်းများအပေါ်တစ် ဦး ချင်းတင်ပို့ခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်နှင့်အမျှကုမ္ပဏီများသည်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်တွင်တန်ဖိုးများကိုဆက်လက်ရှာကြလိမ့်မည်၊
5. အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ Optimization (UEO) ။
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသည် SEO အတွက်အရေးကြီးသည်။ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်မိုဘိုင်းပိုကောင်းသောဆိုဒ်များကို Google ကမျက်နှာသာပေးသည်။ မြန်နှုန်းနှင့်ပျော်စရာကောင်းသည့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသည်မိုဘိုင်းလ်ပိုကောင်းသည့်ဆိုက်၏ထူးခြားချက်များကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်သည်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအပေါ် ပိုမို၍ အလေးပေးလိမ့်မည်။ AMP များသည်ဤအချက်၏ပထမ ဦး ဆုံးလက္ခဏာဖြစ်သည်၊ သို့သော်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေသင့်သည်။
SEO သည်အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းချိတ်ဆက်မှုနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းစသောစွမ်းဆောင်ချက်ရှိသောသုံးစွဲသူများအတွက်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိ Google သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုအနေနှင့်၎င်း၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှသွေဖည်ခြင်းမရှိပဲ app သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ အပလီကေးရှင်းများသည်ရိုးရာဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမကြာမီအစားထိုးနိုင်ပြီးအက်ပလီကေးရှင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်စေသည်
Personal Digital Assistants ၏ရှုပ်ထွေးမှု။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက်များ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများဖြစ်သော Siri နှင့် Cortana တို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဤကဏ္featuresများသည်ဒေသနှစ်ခုလုံးရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင့်မြင့်အခွင့်အလမ်းများကိုတင်ပြသည့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပိုမို၍ အဆင့်မြင့်သောစကားပြောဆိုဆက်သွယ်ရေးရှာဖွေရေးပုံစံများကိုဖြစ်ပေါ်လာစေလိမ့်မည်။
လက်ရှိစျေးကွက်မဟာဗျူဟာများကိုပြောင်းလဲရန်ချက်ချင်းမလိုအပ်ပါ။ သို့သော်ဤခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်သက်ရောက်နိုင်သည့်အလားအလာများကိုသတိပြုမိရန်အရေးကြီးသည်။ ဤသည်အသိပညာသည်ပြိုင်ဘက်များထက်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိစေရန်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။